Tufaaxa Apple Oo Soo Saaray Filimkii Hala, Filimkii Ugu Horeeyay Ee Apple TV + Filim | Wararka IPhone
Maanta waxaan kuu keenaynaa filimka Hala, filimkii ugu horreeyay ee Apple TV ah +. Waana taas in wax walba aysan noqon doonin taxane ... Hala (oo uu qoray oo uu hagayo Minhal Baig) ayaa ina keena taariikh dhibaatooyin jinsi iyo dhaqanKufiican helitaanka waxyaabaha asalka ah ee Apple TV + laga bilaabo Diseembar 6. Boodka ka dib waxaannu kaaga tagi doonnaa filimka 'Hala', filimkii ugu horreeyay ee ka socda Apple TV +, adeegga fiidiyowga ee qulqulka Apple.
Hala, waxaa jilaya Geraldine Viswanathan, wuxuu noo keenayaa sheeko ku saabsan dhibaatooyinka jinsiyadaha, sheeko aan ku kulmi doonno Hala, oo ah dhallinyar u dhalatay Pakistan oo asal ahaan ka soo jeeda Pakistan una baahan inuu wajaho loolanka dhaqanka iyo dhibaatooyinka qoyska. Dhamaan isku qasan a sirta qarsoodiga ah ee qoyska ee aad la kulmi doontid da'daan hore. Filim sidoo kale soo gali doona qaybta rasmiga ah ee Bandhigga Filimka Sundance Ka sokow Bandhig Faneedka Caalamiga ah ee Toronto. Jilayaasha waxaan sidoo kale ku kulmi doonnaa Jack Kilmer, Gabriel Luna, Purbi Joshi, Azad Khan, Anna Chlumsky, iyo Jimmy Chung. Isku soo wada duuboo sida ku cad websaydhada filimka takhasuska leh, Filmaffinity:
Hala waa aabbeheed sharaf iyo farxad. Iyada oo hadiyad u leh daraasado iyo masuuliyad weyn, nolosheeda waxay kala badh u dhexaysaa balaadhinta nolosheeda bulshada iyada oo ah dhallinyar reer Chicago ah iyo shaqadeeda iyada oo ay wajahayaan soogalootiga reer Pakistan ee codsanaya caawimaaddeeda. Sida dhalinyaro kasta, Hala wuxuu bilaabay inuu la kulmo jinsi xoog leh oo xoojiya ka dib markii uu la kulmo Jesse, oo ay isku fasal yihiin oo la wadaagta hamigeeda ku saabsan skateboard iyo gabayada. Si kastaba ha noqotee, aabaha Hala wuxuu leeyahay qorshooyin kale oo iyada ah, wuxuuna qorsheynayaa inuu guursado iyada oo la raacayo dhaqanka dhaqameed ee qoyska. Markii ay gabadha yari bilawdo inay ka hor timaado awooda waalidkeed, xidhiidhkooda wuu dhib badan yahay, isagoo tijaabinaya rabitaanka Hala inuu noqdo mid xor ah oo casri ah.
Marka hadda waad ogtahay, haddii aad rabto inaad ku raaxaysato Hala, waxaad fursad u leedahay ka faa'iideyso tijaabada 7 maalmood ah (hal sano kuwa iibsaday aalad cusub oo Apple ah) oo bixi 4,99 yuuro bishii oo Apple TV + kharash gareeyo muddadan nimcada ka dib. Adeeg si tartiib tartiib ah ugu kori doona asalka Apple-ka asalka ah, oo aan ka heli doonno barnaamijyo TV-yo ah, taxane ah, iyo filimo sida Hala ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple tv » Apple ayaa sii deysay filimka Hala, oo ah filimkii ugu horreeyay ee Apple TV + ah
Maalin kasta - Daboolida, RAM, Photoshop iyo Apple TV + arrimaha